Shiinaha 5g warshad xaashiyaha gelatin iyo alaableyda | Gelken
Tusaale ahaan, keega shukulaatada mousse waxaa lagu sameeyaa iyada oo saliid iyo caano lagu qasay weel nadiif ah ilaa laga cabiray.Sift ku dar isku darka burka iyo budada kookaha iskuna walaaq si wanaagsan Ku dar ukunta ukunta oo si fiican u walaaq; sonkor ku dar ukunta cad sedex qaybood oo garaac geeska fiiqan. Kuleyli foornada ilaa 180 digrii. Qaado seddex meelood meel ukunta cad iyo ukunta ukunta oo si fiican isku walaaq; Ku shub astaamaha ukunta inta soo hartay seddex meelood meel ee ukunta ukunta ukunta oo si fiican isku walaaq. , jilci oo rux dhawr jeer, ku rid foornada kululeysa ee 180 digrii ah 25 daqiiqo, ka soo saar oo qabooji. kareemka iyo sonkorta budada ah ayaa garaacday ilaa lix ama toddobo qaybsi oo kayd ah; Ku ​​rid xaashida gelatin biyo qabow ilaa jilicsan. Ku diiri caanaha iyo shukulaatada digsi yar kuleylka dhexdhexaadka ah (ama biyo). Markay kulushahay, dabka dami oo shukulaatada iyo caanaha isku qas.Markay heerkulka caagga shukulaatada caaggu ka hooseeyaan 50 darajo, walaaq xaashida jilicsan ee jilicsan. Isku darka digaaga shukulaatada ah kareemka la kariyey ilaa inta uu ka fiicnaanayo. si fiican; Giraanta muusku dhig salka (ama saxan fidsan). Dhig hal xabbo oo keeg ah gudaha giraanta muuska. Ku shub nus ka mid ah digaagga mousse dusha dusha keega si aad u jilciso.Qeyb kale oo keeg ah oo korka saar. Ku shub inta hartay mousse Muusiga kareemka fudud iyo shukulaatada digsi yar kuleylka dhexdhexaadka ah. Demi dabka kahor intaan caanuhu karkarin oo si fiican isku walaaq. Dufanka ha qaboobo oo ku shub doolshaha mousse. Haddii ay jiraan wax xumbooyin ah dusha sare, isticmaal caday si aad u soo saarto. Qaboojiyaha ugu yaraan 2 saacadood. Ka qaad oo ku xoq mousse tuwaal kulul ku wareegsan giraanta. Ka qaad oo jarjar xabo gaballo yaryar
Hore: 3.3g Xaashida Gelatin
Xiga: Xaashida Gelatin